SAWIRRO: Nin Hindi ah oo madaxa ka jaray xaaskiisa, ka dibna u qaaday Saldhigga Boliiska, muxuuse u dilay? – Filimside.net
Nin beerayeel ah oo u dhashay dalka India ayaa wuxuu seef madaxa uga jaray xaaskiisa, ka dibna inta madaxeeda oo go’an qaaday ayuu geeyey Saldhigga Boliiska – maxaa yeelay wuxuu ku qabtay iyadoo nin kale kula tumaneysa bartamaha mid ka mid ah beerihiisa.
38 sanno jirkaan oo lagu magacaabo Narayan Singh ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu cagan ku dhiigle yahay, ka dib markii uu kurka ka jaray xaaskiisii Sarita, oo 28 sanno jir ah.
Balse deriska Narayan Singh ayaa daaha ka qaaday in tallaabadaan yaabka leh uu ninkaani qaaday maadaama uu ku qabtay xaaskiisa nin kale.
Xitaa deriska ninkaan ayaa daaha ka qaaday inuu hadda ka hor xaaskiisa sidaan oo kale nin kale ugu qabtay – balse markaan ma uusan cafin, wuxuuna lasoo baxay seeftiisa isagoo ka dibna madaxa ka jaray.
La yaabse waxaa noqotay inuu madaxeedii qaaday isagoo geeyey Saldhigga Boliiska, inkastoo ay deriskiisu Boliiska waceen, hadana isaga ayaa saldhigga lugihiisa ku tegay isagoo weliba Shan Miles usoo lugeeyey, wuxuuna markaas sidaa madaxii xaaskiisa, oo uu timaha ku dhegan yahay.
Singh oo degan xaafadda Ghareli, ee dhacda Ingoria, India ayaa wuxuu sharraxay sababta uu xaaskiisa madaxa uga jaray markii uu Saldhigga yimid, wuxuuna yiri: “Xaaskeygu waxay ka baxday ballantii ay ila gashay.
“Laba jeer ayaan haatan ka hor u digay, laakiin marwalba ballanta ayey iiga baxaysay, waana markii seddaxaad, taas ayaana ah sababta aan madaxa uga jaray.”
Ugu yaraan, xabsi muddo dheer ah ayaa haatan sugaya Narayan Singh.
Waxaa Aqrisay 1,710